आत्मानन्द गोलकपमा माङसेबुङको बिजयी सुरुवात — Harpraharnews.com
११ मंसिर २०७८, शनिबार हरप्रहर न्युज
माङ्सेबुङ । इलामको माङसेबुङमा आत्मानन्द गोलकपको १४औं संस्करण फुटबल खेलकुद प्रतियोगिता आजबाट सुरु भएको छ ।
प्रतियोगिताको पहिलो खेल अन्तर्गत माङसेबुङ गाउँपालिका खेलकुद विकास समितिले सहज जित निकाल्दै दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेकोक छ । गाधुली क्लब सुनसरीलाई सुन्यका विरुद्ध ३ गोल गर्दै माङसेबुङ दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको हो ।
माङसेबुङ गाउँपालिका खेलकुद विकास समितिले सुरुवाति खेलमा नै उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै सुनसरी माथि सहज जित निकालेको थियो । खेलको १८औं मिनेटमा माङसेबुङका जर्सी नं. ७ प्रविण राईले गोल गर्दै टिमलाई अग्रता दिलाएका थिए ।
खेलमा आक्रमक देखिएको माङसेबुङले खेलको २०औं मिनेटमा पुनः प्रविण राईले दोस्रो गोल गर्दै नतिजा दोब्बर बनाएको थियो ।
आफ्नो घरेलु मैदानमा उत्रेको माङसेबुङलाई रोक्न नसक्दा २४औं मिनेटमा जर्सी नं. ७ का प्रविण राईको असिस्टमा जर्सी नं. १७ का राईले माङसेबुङका लागि तेस्रो गोल गरेका थिए ।
निकै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरको सुनसरीले दोस्रो हाफमा जर्सी नं. ३ का विवस सुनुवारले सान्तवना गोल गरेका थिए । खेलकाे म्यान अफ दि म्याच सुनसरीका जर्सी नं. १५ का साैजन राइले प्राप्त गरेका थिए ।
प्रतियोगिता अन्तर्गत भोलिको खेल बि.बि. एफ.सि. दमक झापा र रेड हर्ष इलामबीच हुने आयोजक समितिका अध्यक्ष मनकुमार आङबुहाङले बताए ।
प्रतियोगितामा पूर्वका इलाम, पाँचथर, झापा, मोरङ, सुनसरी र भारतको दार्जिलिङ गरी ८ टिमको सहभागिता रहने समारोह खेलकुद विभाग आत्मा पवित्र हक्चात यक्चुमका अध्यक्ष आङबुहाङले बताए ।
आत्मा पवित्र हक्चात यक्चुमका अध्यक्ष मनकुमार आङबुहाङको अध्इक्षतामा तथा सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादव प्रमुख अतिथ्यमा प्रतियोगिताको उद्घाटन समारोह सम्पन्न भएको थियो ।
अध्यक्ष आङबुहाङका अनुसार प्रतियोगितामा माङसेबुङ गाउँपालिका खेलकुद समिति इलाम, गोधुली क्लब धरान सुनसरी, फिदिम स्र्पोटिङ क्लब पाँचथर, झापा–११ झापा, बीबीएफसी दमक झापा, रेडहर्ष इलाम, माने भञ्ज्याङ फुटबल क्लब दार्जिलिङ भारत र श्रीजङ्गा स्पोर्टिङ क्बल मोरङको सहभागिता रहनेछ । माने भञ्ज्याङ फुटबल क्लब दार्जिलिङ डिफेन्डिङ च्याम्पियन समेत रहेकाे छ ।
प्रदेश प्रमुख खापुङले गरे शुभम् ट्रेडिङ तथा होमस्टेको उद्घाटन